2021 PVC Rubber Label Ukwenza Umshini Umshini Worchain Umshini Ozenzakalelayo | Umshini Womshini Womshini Womshini weWeldo
ukufaka ubuchopho namehlo emshinini
I-Rubber Label Machine Othomathikhi Wokwenza Othomathikhi
I-Desktop Soft PVC ilebula umshini
Umshini we-vertical PVC welebula
Intelligent Visual Crystal Setcheiset Machine
Umugqa ogcwele wokukhiqiza othomathikhi
Umshini obonakalayo obonakalayo obonakalayo
Silicon lome umshini wokwenza
Ilebuli ye-PVC yokwenza umshini wokuxhasa
Othoni othoma othomathisi
Kungani ukhethe i-weldo?
Umshini wokubeka ama-visual disteand abonakalayo
Ukukhiqizwa okuthambile kwenjoloba
Izicathulo zezinyawo zenjoloba zensimbi
I-TPR Gloves Irabha Irabha Ukukhiqizwa
Ukukhuthaza iRubber ukukhuthaza ukukhiqizwa
Umshini wokwenza iRubber Keychain ukwenza
Umshini we-rubber tag ecrege tag yokwenza
Umshini wokwenza iRubber coaster ekwenzayo
Intelligent Enamel Machine
I-Intelligent Outomatic Machine Enamel Izinkinobho
Intelligent Visual Machine Outicle Outic
Umshini obonakalayo obonakalayo obonakalayo wesembozo senjini
Umshini we-Enamel Onamel Obonakalayo | Isikhumbuzo se-Promotion Souvenir
Umshini oqondayo wokupenda ama-logo wengubo
Sula umshini we-crystal doming
Sula i-Epoxy Coating Proang Proating KeyChain | Izinhlamvu zemali
Umshini we-Mosaic Doming Sticker ozenzakalelayo
Isitika se-epoxy | Umshini we-PU leLebel Doming
Ingubo hang tag wombumbulu
Umshini we-epoxy doming inqwaba yezinkinobho
Umkhakha Wezogesi wasekhaya
Ukukhiqizwa kwe-Smart kuqala nge-WElDO
Umholi ekuguqulweni kobuchwepheshe bemishini yombono ohlakaniphile
Ngamashumi eminyaka wokuhlangenwe nakho komkhakha ocebile, iWELDO igxila kwimishini yokuhambisa ezenzakalelayo ngokuphelele nemishini yokufaka imibala. Idlulise isitifiketi sohlelo lwekhwalithi le-ISO9001 futhi inamalungelo obunikazi obuningi ezimele obunikazi namalungelo obunikazi amaningi wesoftware. Inkampani yethu isidlulile isitifiketi sebhizinisi elithambile kabili, izinga lobuchwepheshe lamanje nevolumu yokuthengisa ifinyelele ezingeni elihola phambili embonini.
Umshini wesivinini esiphakeme esiteshini esiphindwe kabili
Isicelo: 1.Suitable for various liquid materials, such as baking paint, epoxy resin AB glue, koqweqwe lwawo, UV glue, abicah electronic, crystal glue, uyinki plastic, inki yensimbi, EMI conductor glue, cohesive conductive, glue instant, casting glue, ukunamathisela kwe-solder, i-lubricant, i-glue yesiliva, i-glue ebomvu, i-paste eshisayo, unamathisela wokuvimbela isomiso, upende osobala, i-ejenti yokulungisa isikulufa, i-PU resin, i-low / middle viscosity glue, njll. I-2.can ingasetshenziswa ekukhipheni oketshezi ketshezi lomsebenzi ohlukile wezinto ezibonakalayo, njengensimbi, ipulasitiki, ukhuni, izitika nokunye.
Weldo 5 imibala PVC / Silicon ilebula dispenser umshini okuzenzakalelayo
Izici: Faka ifayela le-JPG kwisoftware yokuhlela umkhondo wokuhambisa. Isebenzisa uhlelo lwekhompyutha, isoftware ibonakala ngokusobala, elula futhi esheshayo. 3.Single umlomo wombhobho noma umlomo wombhobho multi ingasetshenziswa ngokusho ukukhiqizwa langempela. Imibhobho emikhulu engu-5 isebenza ngokubambisana ukuthuthukisa umkhiqizo. 4.Up kuya kwezingu-8 izinkinobho ezinqamulelayo zezinhlelo, i-suit yokukhiqiza izinqubo eziningi Ngemuva kokuthi uhlelo luhlelwe, lungagcinwa kukhompyutha futhi lusebenze unomphela. Lapho umkhiqizo udinga ukwenziwa ngokuzayo, uhlelo lungabizwa ngqo ngaphandle kohlelo lwesibili. 6.Dispensing isikhunta ezimbili kanyekanye isikhunta isikhundla umsebenzi. 7.Suit imikhiqizo eyinkimbinkimbi futhi ephezulu enezelwe i-PVC nemikhiqizo yabicah. Ukukhiqizwa kwe-Rapid, umshini owodwa ulingana nezisebenzi ezi-3 kuye kwezi-5, ezinganciphisa kakhulu isikhathi sokulethwa kwe-oda. I-9 yenza ngokuqinile imikhiqizo ye-PVC / abicah, ikhwalithi ephezulu, isilinganiso esiphansi esingalungile, kungasiza ukunciphisa izindleko. I-10.Software nokusebenza komshini kulula ukukufunda, kungasiza ukunciphisa isikhathi sokuqeqesha. Indlela ye-11.Programming: Ichashazi, umugqa, i-arc.
Weldo 12 imibala PVC / Silicon ilebula dispenser umshini okuzenzakalelayo
Izici: Faka i-JPG noma ifayili le-DXF kwisoftware ukuze uhlele umkhondo wokuhambisa. Indlela ye-2Flexible programming, ngokuya ngamakhasimende afisa ukukhetha uhlelo lokuqhafaza ikhompyutha noma ukufundisa izinhlelo zebhokisi (ezisebenzisekayo). 3.Single umlomo wombhobho noma umlomo wombhobho multi ingasetshenziswa ngokusho ukukhiqizwa langempela. Imibhobho emikhulu ye-Max12 esebenza ngokubambisana ukuthuthukisa ukukhiqizwa. 4.Up kuya kwezingu-8 izinkinobho ezinqamulelayo zezinhlelo, i-suit yokukhiqiza izinqubo eziningi Ngemuva kokuthi uhlelo luhlelwe, lungagcinwa kukhompyutha futhi lusebenze unomphela. Lapho umkhiqizo udinga ukwenziwa ngokuzayo, uhlelo lungabizwa ngqo ngaphandle kohlelo lwesibili. 6.Dispensing isikhunta ezimbili kanyekanye isikhunta isikhundla umsebenzi. 7.Suit imikhiqizo eyinkimbinkimbi futhi ephezulu enezelwe i-PVC nemikhiqizo yabicah. Ukukhiqizwa kwe-Rapid, umshini owodwa ulingana nezisebenzi ezi-3 kuye kwezi-5, ezinganciphisa kakhulu isikhathi sokulethwa kwe-oda. I-9 yenza ngokuqinile imikhiqizo ye-PVC / abicah, ikhwalithi ephezulu, isilinganiso esiphansi esingalungile, kungasiza ukunciphisa izindleko. 10.Can kuhlanganiswe irobhothi ukwakha ulayini wokukhiqiza othomathikhi ngokugcwele, ongakwazi ukukhiqiza ngokuzenzekelayo futhi wehlise izindleko zabasebenzi. I-11.Software nokusebenza komshini kulula ukukufunda, kungasiza ukunciphisa isikhathi sokuqeqesha. Indlela ye-12 yokuhlela: Ichashazi, ulayini, i-arc.
Weldo 18 imibala PVC / Silicon ilebula dispenser umshini okuzenzakalelayo
Isicelo somkhiqizo: Imikhiqizo 1.Gift 2.Keychain, ibha umata, inkomishi coaster, Impahla ithegi, Ipeni umshayeli icala, I-3.Silicone cae ephathekayo, iwashi le-silicone, isihlakala sesilicone, umnikazi weselula we-PVC, isivuliya sebhodlela le-PVC. I-4.zipper puller, ibheji lenjoloba, isicathulo ngaphezulu, izihlanganisi ze-hook kanye ne-loop 5.Shoes imbondela, TPR anticollision strip for amagilavu, izicathulo yedwa
Ubuchwepheshe bokukhiqiza obuzenzakalelayo ngokuphelele, ukukhulula abasebenzi, ukusindisa abasebenzi nokwenza ngcono ukusebenza kahle!
I-WELDO ihlinzeka ngemishini esezingeni eliphezulu yokuhambisa iglu, izixazululo zezicelo zobuchwepheshe ezintsha nezenzelwe wena ukusiza amakhasimende akhulise ukuguquguquka kwebhizinisi, nokwandisa ukusebenza kahle kokukhiqiza kanye nokufeza izinhloso zokusimama, enze imishini nemishini ezenzakalelayo ikhulise ukusebenza kahle komkhiqizo nokuzinza komkhiqizo, ukushintsha izindleko zokukhiqiza nokwandisa inzuzo.
Imishini ye-WELDO automation inikeza izinhlobo zemishini yokuhambisa kanye ne-scara robot kumakhasimende womhlaba wonke, umkhiqizo wethu usetshenziswa kakhulu ku-elekthronikhi, izimoto, izinto zasendlini, izesekeli zezicathulo, izitika, izithuthuthu, ipulasitiki yokuvuza, amabheji wehadiwe, izipho zobucwebe, amawashi, ukudla, igalofu, ubuciko bezipikili, izesekeli zefoni ephathekayo, izibuko, neminye imikhakha. Amakhasimende wokubambisana wesikhathi eside afaka iMidea, iHuawei, iGree, iSkyworth, iHaier, nezinye izinkampani zeFortune 500 kanye nenani elikhulu lokukhiqiza amabhizinisi amancane naphakathi nendawo.
Ukukhiqizwa ilebula umshini ngesivinini
Ukukhiqizwa kwelebula lomshini wejubane elikhulu
Umshini wejubane eliphezulu wemikhiqizo yokugqama okuphezulu kwe-arc
I-WEIDO Faka umbala kwilebula yemoto yomshini wejubane elikhulu
WEIDO Faka umbala kwilebula yemoto yomshini wejubane elikhulu
I-WELDO yasungulwa ngoMashi 2007.
I-WELDO yinkampani yezobuchwepheshe egxile ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwemishini ezenzakalelayo yokukhiqiza yokulawula uketshezi, njengokuhambisa okuzenzakalelayo kwe-glue, ukukhishwa kwepulasitiki, ukufaka imibala nama-valve womjovo. Isigaba sethu esiyinhloko kufaka phakathi umshini wokuhambisa ne-scara robot, njll.
Nikeza ubuchwepheshe obuhamba phambili bokukhiqiza obenziwa embonini, ubuchwepheshe, okuphelele, ukuthengiswa kwangaphambi kwesikhathi kokuthengisa, ukuthengisa, insizakalo yokuthengisa ngemuva, izixazululo zesicelo sobuchwepheshe ezenziwe ngezifiso, ukukhiqiza ukuzisebenzisela ukubonwa okuthuthukile.
Xhumana nathi ukuthola ezinye izixazululo zebhizinisi
Ukuklama nokucwaninga nokwakha izixazululo zobuhlakani bokufakelwa ezihlinzeka ngenani lebhizinisi lamabhizinisi ngokwezidingo zawo